ကားလောကထဲက ကားမောင်းတဲ့သူတိုင်းလိုလို ကားအိတ်ဇောမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကျောက်ဆန်ခါဆိုတဲ့ နာမည်ကို မကြားဖူးတဲ့သူ မရှိလောက်ပါဘူး။ ကျောက်ဆန်ခါဆိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကားလောက က လူတွေ မွေးစားထားတဲ့ နာမည်တစ်ခုပါ။ သူ့နာမည်အရင်းက Catalytic Converter လို့ခေါ်ပါတယ်။
Catalytic Converter လို့ခေါ်တဲ့ ကျောက်ဆန်ခါလေးရဲ့ အဓိက လုပ်ငန်းစဉ်က ကားအိတ်ဇောကနေ ထွက်လာသော လေထုညစ်ညမ်းစေပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခိုးအငွေ့တွေကို ကျနော်တို့ နေ့စဉ်ရှူထုတ်ရှုသွင်း လုပ်နေရတဲ့ လေထုထဲမရောက်အောင်သန့်စင်ပေးရတဲ့ အလုပ်ကို အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာဝတ္ထုပါ။
Catalytic Converter လို့ခေါ်တဲ့ ကျောက်ဆန်ခါလေးက များသောအားဖြင့် Exhaust Manifold (အိတ်ဇော အထွက် အစုအဝေး) နဲ့ Muffler (အိတ်ဇောအသံဆူညံမှုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အရာ) နှစ်ခုကြားထဲမှာ တည်ရှိပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမားလေးလို့တင်စား ခေါ်ဝေါ်နိုင် ပါတယ်။
ကျောက်ဆန်ခါ က ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?
ကျောက်ဆန်ခါရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ platinum ၊ palladium and rhodium အစရှိတဲ့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ သတ္တုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး ပျားသလက်ပုံစံ အထပ်ထပ်အလွှာလွှာတည်ရှိပါတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့် ကျောက်ဆန်ခါရဲ့ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ခံနိုင်ရည်က 800°F (426°C) အထိခံနိုင်ရည် ရှိအောင် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အိတ်ဇောကနေထွက်လာတဲ့ လေထုအဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်၊ နိုက်ထရိတ်အောက်ဆိုက် နဲ့ မီးအကုန် မလောက်ကျွမ်းဘဲ ကျန်ရှိ နေတဲ့လောင်စာဆီ) တွေဟာ ကျောက်ဆန်ခါရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ ကျောက်ဆန်ခါထဲမှာ တည်ဆောက် ထားတဲ့ သတ္တုတွေနဲ့ ဓာတုဓာတ်ပြုမှု ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်လေထုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေမှု လျော့နည်းတဲ့ ရေ၊ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် တွေကို ပြန်လည် စွန့်ထုတ်ပေးပါတယ်။
ကျောက်ဆန်ခါတွေ ဘာကြောင့် မြန်မြန် ပျက်စီးတာလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့် ဆီရေလေဝိုင်အမြဲကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်နေတဲ့ကားတစီးမှာ ကျောက်ဆန်ခါ တွေရဲ့သက်တမ်းက အတော်ကို သက်တမ်းရှည်ကြာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောက်ဆန်ခါတွေကို လိုအပ် တာထက်ပိုပြီး သက်တမ်းတိုစေတဲ့ အချက်က ကျောက်ဆန်ခါထဲကို မီး မလောင်ကျွမ်းဘဲ ကျန်ရှိနေတဲ့ လောင်စာဆီတွေ ဝင်ရောက်လာစေတဲ့ အကြောင်းရင်းကြောင့်ပါ။ ဒီလို မီးမလောင်ဘဲ ကျန်ရှိနေတဲ့ လောင်စာဆီတွေ ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် ကျောက်ဆန်ခါရဲ့ အပူချိန်တွေ မြင့်မားလာကာ အတွင်းမှာရှိတဲ့ သတ္တုတွေနဲ့ ပျားသလက်အုံတွေ အရည်ပျော်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကျောက်ဆန်ခါကို မြန်မြန်ပျက်စေ တော့တာပါပဲ။
ကျောက်ဆန်ခါထဲကို မီးမလောင်ဘဲ ကျန်တဲ့ဆီတွေ ဘာကြောင့်ဝင်ရောက်ရသလဲဆိုရင်တော့
ဆီနဲ့ လေအချိုးအစား မမှန်တာ
Engine Timing မမှန်တာ
Oxygen Sensor တွေမကောင်းတာ
အစရှိတဲ့ အခြေခံအချက်တွေကြောင့် ကားအင်ဂျင်ရဲ့ မီးလောင်ခန်းထဲမှာ မီးမလောင်ဘဲ ကျန်ရှိတဲ့ဆီတွေ များလာပြီး အိတ်ဇောကနေ တစ်ဆင့် ကျောက်ဆန်ခါထဲရောက်ပြီး ကျောက်ဆန်ခါ ပိတ်တာ၊ ပျက်တာ တွေဖြစ်ပေါ်လာရတာပါပဲ။
Gasket တွေပျက်စီးတာ၊ Valve Oil Seal တွေမကောင်းတာ၊ Piston Rings တွေမကောင်းတော့တာ တွေကြောင့်လည်း အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ Coolant တွေ အိတ်ဇောပိုက်ထဲဝင်ရောက်ပြီး ကျောက်ဆန်ခါတွေကို ပျက်စီးတတ်စေပါတယ်။ အခြားလမ်းမညီညာတဲ့နေရာ၊ ချိုင့်တွေ ခွက်တွေ ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ မောင်းနှင် တဲ့အခါတွေမှာလည်း ကျောက်ချွန်ကျောက်ခဲတွေနဲ့ ကျောက်ဆန်ခါတွေ တိုက်မိပြီး ပျက်စီးတတ်ပါသေးတယ်။
ဒီအချက်တွေက ကျောက်ဆန်ခါတွေ ဘာကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ အချိန်မတိုင်ခင် ပျက်စီးရတာလဲဆိုတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေပါ။
ကျောက်ဆန်ခါ (Catalytic Converter) တွေပျက်စီးသွားရင် ဘာရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
ကျောက်ဆန်ခါတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင် သိသာထင်ရှားစေတဲ့အချက်တစ်ချက်က ညှော်စော်နံတာမျိုးပါ။ အထူးသဖြင့် ဘဲဥပုတ်နံ့တို့၊ ချဉ်စုတ်စုတ်နံ့တို့ စတဲ့ အနံ့ စူးစူးရှရှ ကားထဲကနေ ထွက်လာတာမျိုးဟာ အိတ်ဇောပိုက်က ကျောက်ဆန်ခါမကောင်းရင် ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ။ အဲဒါဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုရင်တော့ ဓာတ်ဆီထဲမှာ ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ Sulfur (ဆာလဖာ) ကြောင့်ပါ။ အဲဒီ ဆာလဖာတွေက မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာ အနံ့ပြင်းတဲ့ Hydrogen Sulfide အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အဲဒီ Hydrogen Sulfide တွေ ကျောက်ဆန်ခါထဲကိုရောက်ရှိတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျောက်ဆန်ခါထဲက သတ္တုတွေနဲ့ ဓာတု ဓာတ်ပြုမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး အနံ့မရှိတဲ့ Sulfur Dioxide အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကျောက်ဆန်ခါပိတ်နေတာ ဒါမှမဟုတ် ပျက်စီးနေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ကျောက်ဆန်ခါက သူ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းမွန်စွာမလုပ်နိုင်တာမို့ စူးရှရှချဉ်စုတ်စုတ် အနံ့တွေ ကားမှာထွက်ပေါ်လာရတာပါပဲ။
Engine Check မီးလင်းလာတာ
ကျောက်ဆန်ခါတွေ လုံးဝပျက်စီးသွားတယ် ဒါမှမဟုတ် ပျက်စီးဖို့ အစပြုလာတယ်ဆိုရင်တော့ Engine Check မီးလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ချက်မီးလင်းလာလို့ Diagnostic Scanner တွေနဲ့ စစ်ဆေး လိုက်တယ်ဆိုရင် P0420 ၊ P0430 အစရှိတဲ့ Error Code တွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့်ကားတိုင်းလိုလို Oxygen Sensor တွေကို ကားရဲ့ အိတ်ဇောပိုက်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး ကျောက်ဆန်ခါကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အိတ်ဇောအငွေ့တွေကို တိုင်းတာပြီး ကားရဲ့ ကွန်ပျူတာ ဘောက်ဆီကို အချက်အလက်တွေပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီလို အာရုံခံဆန်ဆာတွေ ပါဝင်လာတာမို့ ကားမှာပါတဲ့ ကျောက်ဆန်ခါတွေ မကောင်းဘူးဆိုရင် စစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့ အင်ဂျင်ချက်မီး လင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ဆန်ခါပိတ်ဆို့ရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ အခြားရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုက ကားအရှိန်တင်မရတာပါ။ အထူး သဖြင့် ကားချင်းကျော်တက်တော့မယ့် အချိန်၊ ကုန်းတက်တွေကို တက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ကားအရှိန် တင်မရဘဲ ကားဝပ်နေတာဟာလည်း အိတ်ဇောပိုက်က ကျောက်ဆန်ခါတွေပိတ်ဆို့နေရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာပါပဲ။ အဲလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင် ကားအရှိန်တင်ဖို့အတွက် ကားမှာရှိတဲ့ Four Stroke ထဲက Exhaust Stroke ဟာလည်း ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နေမှရပါမယ်။ အိတ်ဇော အထွက်ပိတ်ဆို့နေရင် အိတ်ဇောကနေ ထွက်လာတဲ့ အခိုးအငွေ့တွေက Back Pressure အဖြစ် အင်ဂျင်ထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်တတ်တာမို့ ကားရဲ့ အရှိန်ကို လိုအပ်သလို မြှင့်တင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျောက်ဆန်ခါတွေ အများဆုံးပိတ်ဆို့ရတာကတော့ အင်ဂျင်ထဲမှာ Misfire ဖြစ်ပြီး ဆီတွေ မီးမလောင်ကျွမ်းဘဲ အိတ်ဇောထဲကနေ ကျောက်ဆန်ခါထဲရောက်ပြီး ကျောက်ဆန်ခါတွေ အပူချိန်မြင့် တက်စေကာ ကျောက်ဆန်ခါထဲက ပျားသလက်တွေ အရည်ပျော်စေပြီး ကျောက်ဆန်ခါတွေကို ပိတ်ဆို့ စေတာပါ။
ဒီအချက်ကလည်း အပေါ်က အချက်နဲ့ အကြောင်းအရာတူပါတယ်။ ကျောက်ဆန်ခါတွေ ပိတ်ဆို့တဲ့အခါ အိတ်ဇောအခိုးအငွေ့တွေက အင်ဂျင်ထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီး အင်ဂျင် မီးလောင်ခန်းအတွင်း မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တာများလာရင် ကားမောင်းနေရင်း စက်ထိုးသေတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကားမောင်းရင်း စက်ထိုးသေစေနိုင်တဲ့ အခြား အခြေခံအချက်တွေ အများကြီးရှိပေမဲ့ အခြားအချက်တွေ စစ်ဆေးပြီးသည့်တိုင် ကားမောင်းရင်း စက်ထိုးသေနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ ကားအိတ်ဇောက ကျောက်ဆန်ခါကို မဖြစ်မနေ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အချို့ချို့သော ကားတွေမှာဆိုရင် ကားရပ်ထားတာ အချိန်ကြာပြီး စက်နှိုးလို့လုံး၀ မရတော့တာမျိုးကလည်း ကျောက်ဆန်ခါပိတ်ရင် ဖြစ်တတ်ကြောင်းပါ။
ကျောက်ဆန်ခါထဲက ဆူညံသံ (အထူးသဖြင့် ခွက်ထဲ ပစ္စည်းတစ်ခုခုထည့် ခလောက်သလို) ထွက်တာ မျိုးကလည်း ကျောက်ဆန်ခါတွေ ပျက်စီးနေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကျောက်ဆန်ခါထဲက ပျားသလက်အုံတွေက အပူချိန် မြင့်မားလို့ဖြစ်စေ၊ ကားမောင်းရင်း တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်မိလို့ဖြစ်စေ ကျောက်ဆန်ခါထဲက ပျားသလက်အုံတွေပျက်စီးပြီး အထဲမှာကျကျန်နေတာမို့ ကားမောင်းတဲ့အခါ အိတ်ဇောကနေ ခလောက်သံတွေ ထွက်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကားစက် စစနှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ရှင်းပြခဲ့သလိုပါပဲ။ ကားမှာရှိတဲ့ ဆီနဲ့လေအချိုးမညီမျှမှုတွေကြောင့် ကျောက်ဆန်ခါတွေ ပျက်စီးတတ်ပြီး ကျောက်ဆန်ခါတွေ ပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း အိတ်ဇောကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အခိုးအငွေ့တွေက မူမမှန်တော့တာကြောင့် Oxygen Sensor လို ဆန်ဆာတွေရဲ့ သတင်းရယူမှု အချက်အလက်တွေ မှားယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဆီနဲ့လေ ပေးပို့မှု အချိုးမညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေကာ ဆီစားနှုန်းများလာတတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သတိပြုရမယ့် အချက်တစ်ခုက ဆီစားနှုန်းများလာတာနဲ့ ကျောက်ဆန်ခါကြောင့်လို့ မဆိုသာပေမဲ့ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ အချက်တွေလည်း ဖြစ်နေမယ်၊ ဆီစားနှုန်းကလည်းများနေမယ်ဆိုရင်တော့ အိတ်ဇောပိုက်က ကျောက်ဆန်ခါတွေ ချို့ယွင်းနေပြီဆိုတာ သိသာထင်ရှားစေပါတယ်။
ကျောက်ဆန်ခါတွေ ပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးရည်တွေထည့် ဆေးကျောတာ၊ ဖြုတ်ဆေးကျောတာ တွေလုပ်ပြီး အခြေအနေထပ်မဆိုးအောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သလို လုံးဝပိတ်ဆို့သွားတာ၊ ပျက်စီးသွားတာ ဆိုရင်တော့ အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ကားပိုင်ရှင်တွေလုပ်သလို ကျောက်ဆန်ခါတွေ မကောင်းလို့ဖြုတ်လိုက်တာမျိုးကတော့ အခု နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူး။ Engine Check Light အမြဲ လင်းနေတာ၊ ဆီနဲ့လေ အချိုးအစားမူမမှန်တာတွေ ဖြစ်စေရုံမျှမက ကျောက်ဆန်ခါနောက်က Muffler တွေကိုပါ ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဖော်ပြထားတဲ့ လက္ခဏာတွေပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကျောက်ဆန်ခါတွေ လုံးဝပျက်စီးသည်အထိ အခြေအနေမဆိုးခင် ခေတ်မီကားဝပ်ရှော့တွေမှာ အမြန်ဆုံး ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြု တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးရာတွင် ငွေကောက်ခံမှုနှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များသတ်မှတ်ခြင်း